Pakati pemidziyo inotonhorera yezvirimwa, pane zvakawanda zvakatemwa uye mamodheru evaporative mhepo inotonhorera, akasiyana mamodheru uye maratidziro, kudhura kwemitengo mumusika wekutengesa, uye akasiyana maficha. Icho chirimwa chinotonhodza michina ine yakanyanya kusarudzika.
Sechinyakare chiziviso chebhizinesi rine makore gumi nematatu eindasitiri ruzivo, Xikoo evaporative Mhepo Inotonhorera inoiswa mukati memhepo inotonhorera mumidziyo yekutonhora yemuti.
XAxial kuyerera evaporative mweya inotonhorera: yakakodzera kune masosi ane epakati anoshanda magetsi uye makuru kuyerera.
EntCentrifugal evaporative mweya inotonhorera: inokodzera masosi ane diki ekudzikisa mweya vhoriyamu uye yakakwira kushanda kumanikidza;
③No-mota yakanyanyisa kutonhora feni inotonhorera: Shizha rakasarudzika-rakaumbwa rinotungamirwa neyekunze gasi kumanikidza kusiyanisa, iyo inotenderera neiyo pivot, uyezve inoburitsa kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye simba-rinoponesa echisikirwo mweya yekushandisa mweya ine yakanaka yemukati mweya yemhando.
Iwo akakosha mapoinzi eXikoo evaporative mweya inotonhorera kumisikidza:
①Pamusoro panofanirwa kuverengerwa kudzivirira mvura kubuda.
Kuiswa kwedenga mhepo inotonhorera kunofanirwa kuve kwakakwirira kupfuura iko padenga, uye zvimisikidzo zvinofanirwa kunge zvakatomisikidzwa, uye zvimisikidzo zvekusungira zvinofanirwa kuve zvakagadzirwa neasherwa washer kudzivirira kusununguka panguva yekushandisa;
PipePayipi dhayamita yemhepo inobuda haigone kudzikiswa, asi inongowedzerwa. Iyo shading mambure inofanirwa kuiswa, uye mhepo uye mvura cap inofanirwa kusimudzwa kana mhepo yarema;
LayerRukoko rwe millimeter rabha pad rinosimudzwa pakati pehwaro hwe evaporative mweya inotonhorera uye hwaro kudzikisira vibration;
IndustryIyo Xikoo indasitiri evaporative mweya inotonhorera yakabatana neyekufefetera dhayeti uchishandisa inochinjika chubhu (yakapfava mbishi zvinhu uye isina kubatidzwa), iyo urefu haifanire kunge iri pasi pe200mm, uye pombi dhayamita yakafanana neyekupinza uye kutumira kunze kutengeserana marongero e denga remhepo rinotonhorera. Kuti uone kuti hosipaini inoita senge haina kushatiswa panguva yese yekuita kwesoftware software, inofanira kuiswa nemazvo. Kune chena kanivhasi hosi yakaiswa pamugumo wekukwevera kweiyo Xikoo evaporative mweya inotonhorera, inogona kuiswa zvishoma kusimba kudzivirira iyo Xikoo evaporative mweya inotonhorera kubva mukuyamwa mukati mekushanda uye kudzikamisa muchinjikwa-chikamu chechena chechena kanivhosi hosi.
Unyanzvi hwakananga kutungamira kweXikoo indasitiri mweya inotonhorera:
Nhanganyaya: Pasi pemamiriro ezvinhu akajairika, Xikoo evaporative mweya inotonhorera ane mamwe akanyanya tembiricha mamiriro pavanenge vachishanda mukamuri tembiricha, asi vese vari mukati meyakajairika renji. Imhaka yekuti zvidimbu zvemidziyo zvinokweshana, zvichikonzera kupisa kwekupisa uye kupisa kwakanyanya kwegobvu. Asi hazvireve hazvo kuti tembiricha yakanyanya kukwirira.
Evaporative mweya inotonhorera iyo tembiricha yeakavharirwa yemiti kutonhora michina inodarika yakaenzana kukosha. Zvikonzero zvakakosha zvinotevera:
① Yakaderera kushanda kumanikidza kwekuchinja magetsi.
②I mota iri kunze kwechikamu chekusimbisa muviri kana iyo wiring haina kunaka;
③Kutenderera kubereka mota kunoparadzwa, uye kubvumidzwa kwekudyidzana kushoma, uko kusingaite zvinodiwa;
Kudzivirirwa kwekukwikwidza kwesoftware software kwakanyanya kana iyo mhepo inotonhorera haina kuiswa nesainzi uye mota yakazadzwa. Icho chikonzero ndechekuti iyo yekudzivirira coefficient yeiyo pombi network yakakura kwazvo kana iyo pombi index index gedhi vharuvhu haina kuvhurwa.